गर्भपतन: जिन्दगीमाथि कस्को अधिकार? भ्रुणको या महिलाको? « AayoMail
गर्भपतन: जिन्दगीमाथि कस्को अधिकार? भ्रुणको या महिलाको?
2021,4 September, 8:09 am
अमेरिकाको टेक्सस राज्यमा गर्भपतसम्बन्धि एउटा नयाँ कानुनले तरंग ल्याइदिएको छ। यही सेप्टेम्बरदेखि लागु भएको यो कानुनअनुसार कसैले गर्भवती भएको छ महिनाभन्दा बढीको गर्भपतन गरेमा उसलाई कानुनको दायरामा ल्याइनेछ।
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा यो कानुनमाथि रोक लगाउन भन्दै रिट पनि परेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बेन्चले यो कानुनमाथि रोक लगाउन अस्विकार गरिदिएको छ।
अदालतको यो फैसलालाई राष्ट्रपति जो बाइडेनले ‘महिला अधिकारमाथि अभूतपूर्व आक्रमण’ भनेका छन्।
१०७३मा सर्वोच्च अदालतले नै गर्भपतनलाई अमेरिकामा बैध गराइदिएको थियो। तर गर्भपतनको मामला अमेरिकामा कन्जर्भेटिभ पार्टी समर्थकहरूको राजनीतिक मुद्दा बन्दै आएको छ।
अमेरिकाको एउटा अनुसन्धानमुलक संस्था गुटमाकर इन्स्टिच्युटका अनुसार पूरै अमेरिकाका हरेक राज्यपिच्छे यसबारे अलग अलग कानुनहरू छन्। पिउ रिसर्च सेन्टरका अनुसार अमेरिकामा गर्भपात एक त्यस्तो मुद्दा हो जसले अमेरिकी कंग्रेसका सदस्याहरूलाईसमेत विभाजन गराइदिन सक्छ।
लगभग सबैजसो डेमोक्र्याटहरू गर्भपतन अधिकारको पक्षमा छन्। तर सबैजसो रिपब्लिकन पार्टीका समर्थकहरू भने सकै गर्भपतनको विरोधमा उभिन्छन्। सेन्टरका अनुसार अमेरिकाका अरू त्यस्ता विरलै मुद्दा होलान् जसका लागि अमेरिकी यति धेरै विभाजित भएका होउन्।
हालै भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि गर्भपतनको यो मुद्दा निकै जोडतोडले उठेको थियो। २०२०को जनवरीमा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प गर्भपतन विरोधीहरूले निकालेको एउटा आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए। अमेरिकी इतिहासमा यसरी एउटा विरोध जुलुसमा सहभागी हुने ट्रम्प पहिलो राष्ट्रपति हुन्।
यसलाई ‘मुटुको धड्कन’ कानुनका रुपमा परिभाषित गरिएको छ। यसलाई प्रो लाइफ समूहले समर्थन गरिरहेका छन्। उनीहरूको यो दाबी छ कि यो कानुनले कैयौं भ्रुणहरूको रक्षा गरेको छ जसले गर्दा कैयौ बच्चाहरू नयाँ जीवन लिएर धर्तीमा आउनसक्छन्।
यसलाई ‘हार्टबिट’ कानुन किन भनिएको हो भने छ महिनापछि भ्रुणमा धड्कन आउन थाल्छ।
तर अमेरिकन कलेज अफ अब्स्ट्रिशन एन्ड गाइनोक्लोजिस्टले भनेको छ यो प्रचार भ्रमित हो।
गर्भपतनका बारेमा अहिले अमेरिकामा थरिथरिका बहसहरू चलिरहेका छन्। एक पक्षले भनिरहेको छ कि गर्भपतन एक महिलाको आफ्नो इच्छा हो अनि उसको प्रजननको अधिकार हो। अर्को पक्ष भनिरहेको छ कि यो भ्रुणको अधिकार हो। उसले जिन्दगी पाउनुपर्छ। अनि हरेक जीवनको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो।
म्याक्स अस्पतालका स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. भावना चौधी भन्छिन् ‘अल्ट्रासाउन्ड गर्ने उच्चस्तरीय प्रविधिबाट छ हप्ताको भ्रुणको धड्कन पत्ता लगाउन सकिन्छ। तर यसको मतलव यो होइन कि महिलालाई गर्भपतनको अधिकार छैन।’
एशिया सेफ अबोर्शन पार्टनरशिपको नाममा काम गरिरहेको एउटा सञ्जालका संयोजक डा. सुचित्रा दलवी भन्छिन् ‘डेमोक्र्याटहरू सधै ‘प्रो-च्वाइस’ रहे तर रिपब्लिकनहरू आफूलाई ‘प्रो-लाइफ’ भन्छन्। उनीहरू एउटी महिलाको जिन्दगीलाई कुनै मतलव गर्दैनन्। उनीहरूका लागि एउटा महिला भन्दा एउटा भ्रुणको जीवनको महत्व बढी छ।
‘एउटी महिला जो गर्भवती भएकी हुन्छे जिन्दगीको महत्व त त्यही महिलाको हुन्छ न कि त्यो गर्भमा भएको भ्रुणको’ उनको तर्क छ।
सुरक्षित गर्भपतनको मुद्दामा २५ वर्षदेखि काम गर्दै आएकी सुचित्रा भन्छिन् ‘भ्रुणको अधिकार कसले दियो? जबसम्म उसले जन्म लिएर मानिसका रूपमा धर्तीमा आउँदैन तबसम्म उसको मानवअधिकारसम्म हुँदैन। जसको शरीरमा उ बाँचिरहेको हुन्छ उसको शरीरलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। तर जब त्यो गर्भ एउटी महिलालाई आफ्नो शरीरमा राख्न मन छैन भने अरू कसैलाई के अधिकार छ उसलाई यसो गर् र उसो गर् भन्ने!’
विश्वका विभिन्न देशहरूमा गर्भपतनको कानुन फरक फरक छन्।
भारतमा २४ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाइने कानुन छ।
नेपालमा भने साधारण अवस्थामा रहेको गर्भ १२ हप्तासम्म र बलात्कार वा हाडनाता सम्बन्धमा रहन गएको गर्भ भने १८ हप्तासम्म पतन गर्न सकिने कानुन छ। बिबिसीबाट